Socialbungy: Ndị ọgbọ gị na ndị ọgbọ Marketing Platform | Martech Zone
Mgbe obula onye mgbasa ozi ohuru debanyere aha na saiti anyi ma ha nwere ikpo okwu ahia, anyi na-amakpu miri ma mee ihe omuma banyere ha. Egwuregwu Social n'oge na-adịbeghị anya debanyere aha iji kpọsaa ngwa ngwa ka anyị wee chọpụta ha ma chọọ ịkọrọ gị ya.
Egwuregwu Social bụ ahia ahia na ibido ijide ndu maka iPad (ma ọ bụ mbadamba ọ bụla & PC) eji agba ọsọ, asọmpi, na ụdị nbanye. Zuru oke maka nkwalite ụlọ ahịa, kiosks, ụlọ mmemme, ma ọ bụ ọbụna n'ọhịa. Nye ndị mmadụ ihe mere ị ga-eji gaa ụlọ ntu ma ọ bụ kiosk gị:
Nleta 44% n'ihi ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwalite kwalitere.
32% gaa na ilele ngwaahịa ngwaahịa.
13% gaa na ilele ọdịnaya mmekọrịta.
Nleta 11% iji lelee ngosipụta ngwaahịa.
Ọ dịghị mmepe dị mkpa na ikpo okwu nwere ike ahaziri gị ika, gụnyere ihe oyiyi. Ndị a bụ ndapụta ebe SocialBungy kachasị mma iji:
Eventlọ Ntuziaka na Kiosks - Tugharia ụlọ ntu ndị ọbịa ahụ, ndị ọbịa n'ọnụ ụzọ, ma ọ bụ mkparịta ụka gị na-ezute n'oge ihe omume gị niile na asọmpi, ụdị nbanye, ma ọ bụ nkwalite ọ bụla ọzọ.
Ahịa na-egosi - Nye ụlọ ahịa gị na-egosi ụlọ ahịa ihe nkwalite site na obere vidiyo na igbe igbe. Jiri mbadamba nkume gị ma ọ bụ kọmpụta iji kwalite nkwalite iji jide gị ozugbo na ụlọ ntu gị.
In-Store na etalọ nkwari akụ - Na-agba ọsọ na mgbasa ozi ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ijide ụzọ ma gbanwee ha ozugbo n'ụlọ ahịa.
Nkwalite n'okporo ámá - Jiri iPad iji gbanwee mmekọrịta ndị ọgbọ na ibe gị na ahịa gị.
Akụkụ na-akpali akpali nke SocialBungy bụ na ọ dị njikere maka ojiji otu. Weghara ojiji nchịkọta gafee ndị ọrụ gị, soro oge nke ọ bụla, ma nyochaa ọnụọgụ nke ntinye ọ bụla na-anakọta.
Tags: ụlọ ndozina-echerekioskndu ndundebanyeretailNkwado ire ahịaotu ahiaelekọta mmadụụlọ ahịankwalite n'okporo ámámbadambaihe ngosi ahia
Feb 5, 2014 na 9:01 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi a Douglas. N'ezie amachaghị m na Socialbungy mana m ga-elele nke a n'oge adịghị anya.
Feb 6, 2014 na 3:38 PM
HI Barbara, Abụ m onye nchoputa ebe a na SocialBungy. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịgba ọsọ, nweere onwe gị izigara m email barwick@socialbungy.com